4:23 AM ဟိုဟို ဒီဒီ No comments
အပင်က ခါးထောက်နေသလိုပဲ၊ အပင်စိတ်ဆိုးနေတယ်
2:40 AM သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ 1 comment
Easter song performed by musical orchestra ''Stupovi'' and various Serbian singers and celebrities, dedicated to the resurrection of Christ, made asapart of an action of raising funds for reconstruction of medieval Serbian orthodox monastery ''Pillars of Saint George''.
Christ God is risen! Let us rejoice! Ljudi likujte, narodi čujte:
2:18 PM ပင်ကိုရေးဝတ္ထုတို, သူ့အကြိုက် ပုံတူ5comments
ပုံတူ ရေးဆွဲပေးဖို့ ပန်းချီဆရာ အိမ်တစ်အိမ်ရှေ့ကိုရောက်နေပါပြီ။ ခြံတံခါးနိမ့်နိမ့်လေးရှေ့ခြေအစုံရပ်လိုက်တာနဲ့ အနက်ရောင် ခွေးတစ်ကောင် အလောတကြီးပြေးလာပြီး အာခေါင်ဖြဲဟောင်ပါတော့တယ်။ ပန်းချီဆရာ ခြေလှမ်းတွေ နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်မိသေးရဲ့၊ ခွေးကဖြင့် ခြံထဲမှာပဲ၊ ခြံထဲမှာတောင်မှ ညာဘက်ခြမ်းက ခြံဝန်းလေးထဲမှာ၊ အပြင်ထွက်လို့ မရလေ ဒေါသတကြီး အသံကိုမြှင့်ပြီး ဟောင်လေနဲ့ပေါ့၊ ခွေးက သူ့ရဲ့အမြီးကိုတော့ တလှုပ်လှုပ်ခါယမ်းလို့၊ မိတ်ဆွေလား ရန်သူလား စူးစမ်းနေဟန်တူရဲ့၊ အိမ်ထဲက မိန်းကလေးတစ်ယောက် လှစ်ကနဲ အိမ်အပြင်ရောက်လာတယ်။ ငုဝါရောင်ဂျာကင်တိုကပ်ကပ်အောက်မှာ အစိမ်းနုရောင်တီရှပ်လေးက ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စထွက်လို့၊ ဂျင်းဘောင်းဘီအနက်ကျပ်ကျပ်၊ ခြေတံသွယ်သွယ်နဲ့မိန်းကလေး၊ အနက်ရောင် ဆံပင်ပျော့ပျော့ဖားဖားတွေ ၀ဲကနဲခါပြီး ခြံတံခါးဆီရောက်လာခဲ့တယ်။
“အချိန်တိကျလိုက်တာရှင် ညနေ ငါးနာရီတိတိပဲ”
ပန်းချီဆရာတစ်ခုခုပြန်ပြောဖို့ ပါးစပ်ပြင်တုန်းမှာပဲ ...
“လာပါရှင် အိမ်ထဲကို၊ အဖေတို့ လည်းရှိကြတယ်။ မောင်လေးကတော့ ရုံးဖွင့်ရက်ဆိုတော့ မြို့ကို မနက်အစောကြီးကပဲ ဘတ်စ်ကားနဲ့သွားပြီ။ လာ လာ၊ ညီမလေးရေ .. ညီမလေး”
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ မိန်းကလေးက သူ့ရဲ့ညီမလေးတဲ့ လှမ်းခေါ်ပါတယ်။ ပန်းချီဆရာသိတာက ဒီကလေးမမှာ မောင်ငယ်တစ်ယောက်ပဲရှိတာပဲ၊ မိန်းကလေးက ဟိုဒီ စောင်းငဲ့ကြည့်တယ်။ အနီးအနားက အပင်အုပ်အုပ်လေးအောက်မှာ မီးခိုရောင်ကြောင်တစ်ကောင် “အင်” လို့ ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ပြန်ထူးပါတယ်။ အော် ... မိန်းကလေးရဲ့ ညီမလေးဆိုတာ သူပဲကိုး၊ မီးခိုးရောင်ကြောင်က မီးခိုးရောင် မျက်လုံးတွေနဲ့ ကဗျာဆရာကို စိုက်ကြည့်ပါတယ်။
“ရှင် ကြောင်ချစ်တတ်သလားပဲ၊ ကျွန်မရဲ့ညီမလေးလေ၊ ကျွန်မက ညီမလေးလို့ပဲခေါ်တယ်”
“ကြောင်လား၊ မချစ်ဘူးထင်တာပဲ၊ ခွေးတွေလည်းမချစ်ဘူး၊ ခွေးတွေကလည်း ကျွန်တော့်ကိုမကြိုက်ကြဘူး။ ဟောဟိုဘက်ခြံက ခွေးတောင် ကျွန်တော့်ကို လှမ်းဟောင်နေတာ ကြည့်ပါလား”
“ခစ်ခစ် .. အဲဒါ ကျွန်မတို့ခွေးပဲ အဲဒီဘက်က အသီးအနှံတွေစိုက်ထားတဲ့ခြံလေ၊ ဘရောင်းကို ခြံစောင့်အဲဒီဘက်မှာထားတယ်။ ညနေဆို ကျွန်မတို့ သူ့ကို ကြိုးဖြည်ပေးထားတယ်။ တစ်နေကုန်တော့ သူ့အိမ်လေးနားမှာပဲ ကြိုးချည်ထားတာပေါ့ရှင်”
“ဟင် တစ်နေကုန် ချည်ထားတယ်”
ပန်းချီဆရာက စိတ်ထဲကနေလည်း အပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ မိန်းကလေးရေ မင့်ကို ကြိုးနဲ့ ချည်ထားရင် ကြိုက်မလားကွဲ့၊ တစ်နေကုန် မင်းလေး အိမ်ထဲမှာနေ ... နေရမယ်လေ၊ ကဲ .. ဘယ်လိုလဲ။
“တစ်နေကုန်ချည်ထားရတာပေါ့ရှင်၊ ကျွန်မတို့ သူ့ကို လိုက်စောင့်ကြည့်မနေနိုင်ဘူး။ တစ်ယောက်မှ မအားကြဘူးလေ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို ဘရောင်းကသွားကိုက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ တရားစွဲခံနေရဦးမယ်၊ အလျော်တောင်းမယ်၊ တနင့်တပိုးကြီးပေးရမှာရှင်၊ ပြီးတော့ ခြံစောင့်ပေးဖို့ အလုပ်က သူ့ရဲ့အလုပ်ပဲလေ၊ တနေကုန် သူ့အိမ်လေးထဲပဲ နေရတော့ ညကျတော့ လွှတ်လိုက်တာနဲ့ သူက ပိုဟောင်ရောပဲ၊ လူစိမ်းအရိပ်လေးမတွေ့လိုက်နဲ့၊ တွေ့တာနဲ့ သူက အားကုန်ဟောင်တော့တာပဲ၊ ညကျရင် ကျွန်မတို့အတွက် စိတ်ချရတာပေါ့၊ ဒါကြောင့် သူက ရှင့်ကို ဟောင်တာပါရှင်၊ ရှင့်ကို မကြိုက်လို့တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး၊ ခစ် ခစ်”
မိန်းကလေးက စကားတွေ သွက်သွက်ပြောပြီး အသံလွင်လွင်လေးနဲ့ ရယ်လိုက်ပါတယ်။
ပန်းချီဆရာ စိတ်ထဲမတွေ့လှပေမဲ့ သူမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမို့ ဥပေက္ခာပြုလိုက်ပါတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ အသံလွင်လွင်လေးထဲကိုပဲ စီးမြောကြည့်လိုက်တယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ မျက်လုံး၊ နှာတံ၊ မေးစေ့နဲ့ မျက်နှာကျအားလုံးကို စိတ်မှန်းနဲ့ ပုံတူ စပြီးရေးကြည့်ပါတယ်။ သူတို့ ဧည်ခန်းထဲမှာ ထိုင်ကြတော့ မိန်းကလေးရဲ့ အဖေ၊ အမေတွေက အသီးသီး နှုတ်ဆက်စကားဆိုကြတယ်၊ နဂိုက မကျယ်တဲ့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ အလုအယက်နှုတ်ဆက်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ပါ ပြည့်ကျပ်ကုန်ပါတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ မျက်နှာကျက အမေနဲ့တူနေတယ်။ မေးရိုးနည်းနည်းလေး ဘေးကို ကားထွက်နေသယောင်ယောင်၊ ပြီးတော့ မျက်ခုံး၊ မျက်ခုံးတွေက အမေ့ရဲ့ မျက်ခုံးတွေအတိုင်းပဲ၊ မျက်ခုံးအစမှာ ခပ်စိုက်စိုက်နဲ့ ပြီးတော့ဒေါင့်ချိုး အပေါ်ကိုကွေးတက်သွားတဲ့မျက်ခုံးမျိုးပေါ့၊ အမေက မပြုမပြင်ပဲထားဟန်တူရဲ့ မျက်ခုံးထူထူနှစ်ခုက မျက်နှာမှာ အထင်းသားမြင်နေရတယ်။ မိန်းကလေးကတော့ ပိုပြီး ပင့်တင်ကာ သေးသေးသွယ်သွယ်ဖြစ်အောင် ပုံဖော်ထားလေတယ်။ နှာတံ၊ နှုတ်ခမ်းနဲ့ မေးစေ့ကတော့ မိန်းကလေးရဲ့အဖေအတိုင်းပါပဲ၊ အတူဆုံးက မေးစေ့၊ မေးစေ့ရဲ့အလယ်မှာ ခွက်ပြီးချိုင့်ဝင်နေပုံက မိန်းကလေးကို စွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဖန်တီးထားသလိုလို၊ ပန်းချီဆရာရဲ့ မျက်လုံးထဲ မေးစေ့နှစ်ခွနဲ့ အမေရိကန်မင်းသား ဂျွန်ထရာဗိုလ်တာကိုမြင်မိသေးတယ်။ မိန်းကလေးက သိပ်အချောအလှကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ အားလုံးခြုံကြည့်ရရင်တော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးတော့ ဖြစ်နေပါတယ်။
“ရှင် ကော်ဖီသောက်မလား၊ လဘက်ရည်လား”
“ဗျာ .. ကော်ဖီပေါ့”
“ထည့်မယ်၊ ကော်ဖီတစ်ဝက်၊ နွားနို့တစ်ဝက်၊ သကြားက တစ်ဇွန်းလောက်”
မိန်းကလေးက မေးခဲ့ပေမဲ့ ပန်းချီဆရာဖြေလည်းဖြေပြီးရော မိန်းကလေးအမေက ကော်ဖီနှပ်ဖို့ ထသွားပါတယ်။ မိန်းကလေးအဖေက စကားတွေအများကြီးပဲ ပြောတယ်။ မိန်းကလေးဟာ မြို့မှာ စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့ရခဲ့ပြီးပေမဲ့ အလုပ်ရှာနေဆဲပဲတဲ့၊ အသီးအနှံအပင်တွေကလွဲလို့ ဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိတဲ့ ရွာလေးကို မိန်းကလေးက စိတ်ကုန်နေတယ်၊ မြို့ကြီးက အလုပ်တစ်ခုခုရဖို့ မိန်းကလေး နေ့တိုင်း စောင့်မျှော်နေရှာတယ်။ အလုပ်ခေါ်စာတွေကို အမြဲစူးစမ်းနေတယ်။ အလုပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလျှောက်နေသတဲ့၊ ဒီရွာလေးက ဒီအိမ်လေးထဲမှာ တစ်ရက်ကလေးမှ မနေချင်ရှာဘူး၊ ဒီရွာလေးက ဒီအိမ်လေးထဲမှာ မိန်းကလေး သိပ်ကို ပျင်းရိနေခဲ့သတဲ့၊ မိန်းကလေးအဖေက မိန်းကလေးရဲ့အကြောင်း တစ်ဘ၀လုံးစာ သိသွားရတော့မလောက်အောင်ပဲ တခဏလေးအတွင်းမှာကို စုံစုံစေ့စေ့ပြောပြပါတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်စကြရအောင်လား၊ အခုအချိန်မှာမှ မစရင် မှောင်သွားတော့မယ်၊ ကျွန်တော့်အတွက် နေရောင်မရှိရင် ပုံတူဆွဲရတာ အဆင်မပြေဘူးဗျ”
ပန်းချီဆရာ နားထဲ စကားတွေပြည့်လာတော့ ခေါင်းထဲမူးဝေလာပြီ၊ သူ ပုံတူဆွဲဖို့ လာခဲ့တာလေ၊
အဲဒီတော့မှ မိန်းကလေးက အလောတကြီး မေးပါတယ်၊
“ဟုတ်ပါ့ရဲ့၊ ကျွန်မ ဘယ်နေရာမှာ ....”
ပန်းချီဆရာက နေရောင်လင်းလင်းထင်းထင်းရနေတဲ့ တံခါးပေါက်ဘေးနားက ခုံမှာပဲ ဘေးတစောင်းအနေအထားနဲ့ ထိုင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်နဲ့ တည့်တည့်ကြီးထိုင်နေဖို့မလိုဘူး၊ ကျွန်တော် က ဒီနေရာမှာပဲထိုင်မယ်”
မိန်းကလေးရဲ့ ပုံတူအတွက် pastel နဲ့ပဲ ဆွဲဖို့ ပန်းချီဆရာပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆီဆေးနဲ့ဆွဲရင်တော့ ပိုပြီးအသေးစိတ် တိတိကျကျရှိပေမဲ့ ဒီမိန်းကလေးအတွက်က မလိုအပ်ဘူး၊ မိန်းကလေးက အမှတ်တရ သိမ်းထားချင်တာလောက်ပဲ၊ ကတ်ဘူးထဲက pastel ချောင်းတွေ ထုတ်ယူလိုက်တော့၊ မိန်းကလေးက စွေ့ကနဲ ပန်းချီဆရာအနားရောက်လာပါတယ်။
“ကျွန်မ ကြည့်ချင်လို့၊ ဘယ်လိုပါလိမ့်”
“ကျွန်မ ခြစ်ကြည့်မယ်နော်၊ နည်းနည်းပဲ၊ ကျွန်မ ပုံဆွဲဖို့ဝါသနာပါတယ်ရှင့်”
မိန်းကလေးက အစိမ်းနုရောင် pastel တစ်ချောင်းကိုယူပြီး သူ့လက်ဖ၀ါးမှာ ရေးခြစ်ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ လက်ဖ၀ါးမှာ ထင်လာတဲ့ ဆေးရောင်ကို ကြည့်ပြီး သဘောကျစွာ ပြုံးရယ်ပြန်တယ်။
“နေရာမှာပြန်ထိုင်ပါဗျာ၊ ပုံတူ ဆွဲမလို့”
“ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်၊ ကျွန်မ လှုပ်ရှားလို့ မရဘူးလား၊ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ”
“လှုပ်ရှားလို့ရတာပေါ့၊ ခင်ဗျား ကော်ဖီသောက်လို့ရတယ်၊ ကိတ်မုန့်စားလို့ရတယ်၊ နာရီဝက်၊ အလွန်ဆုံး ၄၅ မိနစ်ပဲ၊ အဲ ခင်ဗျားထိုင်ခုံမှာပဲပေါ့၊ အခုလို ခုံကနေ ထမပြေးတာတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ”
ပန်းချီဆရာ နောက်ပြောင်လိုက်တော့ မိန်းကလေးက ခစ်ကနဲ ရယ်လိုက်ပါတယ်။ ပုံတူဆွဲခံရမယ့်သူက စိတ်ပျော်ရွှင်ပေါ့ပါးနေရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ပန်းချီဆရာက ယူဆပါတယ်။ မျက်လုံးတွေကပါ ရယ်မောနေရင် ပိုကောင်းဦးမယ်၊ ဒီမိန်းကလေးရဲ့ မျက်နှာက တကယ်တမ်းဆို မာကျောတဲ့ မျက်နှာမျိုးပဲ၊ နူးညံ့မှုတွေ သူ့မျက်နှာမှာ ရှားပါးနေတယ်။ နှုတ်ခမ်းတွေက ပြုံးရယ်လိုက်သည့်တိုင်အောင် မျက်လုံးတွေက အေးစက်နေဆဲပဲ၊ ပြုံးရယ်လိုက်တဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကတောင် ခပ်မဲ့မဲ့ဖြစ်သွားတတ်သေးတယ်။ မိန်းကလေးမျက်လုံးတွေရဲ့အလိုမကျမှုတွေက သူ့အပြုံးအရယ်တွေကို ဖုံးကာနေတယ်။
ပန်းချီဆရာ စက္ကူပြားကြီးကို ဖိုင်ထဲက ဆွဲထုတ်ပြီး အသင့်ယူလာတဲ့ ကတ်ထူပြားကြီးပေါ်မှာတင်ပါတယ်။ စက္ကူပြားကို မလှုပ်အောင် ကတ်ထူပြားမှာ ကလစ်နဲ့ညှပ်လိုက်တယ်။ ပန်းချီဆရာ ပုံတူဆွဲဖို့ စပြီဆိုတာနဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ အမေက ပန်းချီဆရာအနားကို ရောက်လာလိုက်ပြီ၊ လက်ထဲမှာ ကော်ဖီခွက်နဲ့ သကြားပုလင်းလေးကိုင်လို့ ခုံတစ်ခုံဆွဲလာပြီး ပန်းချီဆရာဘေးမှာ ချထားပါတယ်။ ကိတ်မုန့်တစ်ပန်းကန်လည်း ယူလာခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ပန်းချီဆရာရဲ့ဘေးနားမှာ လာထိုင်တယ်။ ဘာဆေးရောင်မှ မတင်ရသေးတဲ့ စက္ကူပြားကြီးကို သေသေချာချာစိုက်ကြည့်နေပါပြီ။
ပန်းချီဆရာက အုတ်ခဲရောင် pastel ချောင်းနဲ့ ပုံတူစပြီး ဆွဲတယ်။ ဘေးတစောင်းအနေအထားကဆိုတော့ မျက်နှာကျကိုပဲ အရင် ဆွဲတယ်။ ရှေ့တည့်တည့်အနေအထားကဆိုရင်တော့ မျက်လုံး၊ နှာတံ၊ ပါးစပ်တွေကို စပြီးဆွဲပါတယ်။ အရင်ကတော့ ပုံတူဆွဲရင် sketch ကို ခဲနဲ့ ဆွဲပြီးမှ အရောင်တွေလိုက်ဖြည့်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ အုတ်ခဲရောင် နောက်ခံနဲ့ပဲ မျက်လုံး၊ မျက်ခုံ၊ ဆံပင်တွေကို ပုံဖော်တော့တယ်။ အဲဒီအရောင်က နောက်ပိုင်း အရောင်တွေတင်လိုက်တဲ့အခါ ကျန်နေတဲ့ အုတ်ခဲရောင်ဆေးတွေက အလင်းကို မြင်ရတဲ့အတွက် ပုံတွေမှာ ပိုပြီး ကြွကြွရွရွရှိသလို၊ အသက်ဝင်သလိုပဲလို့ ပန်းချီဆရာက ယူဆပါတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ မျက်နှာကျကို ပုံဖော်ပြီးတဲ့အခါ မိန်းကလေးရဲ့ မျက်လုံးတွေကို ဖြည့်တယ်။ နှာတံ၊ ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်း၊ ပြီတော့ မေးစေ့၊ အလယ်က ချိုင့်ခွက်လေးကို ဆွဲတယ်။ မိန်းကလေးက ထိုင်နေရင်းကနေ သူ့ရဲ့ပုံတူကို မြင်ရအောင် ခါးဆန့်ကာ ခဏခဏလှမ်းကြည့်ပါတယ်။ အောက်ခံ အုတ်ခဲရောင် ပုံတူရဲ့ သူ့မျက်နှာအနေအထားကို မိန်းကလေးက သဘောကျသွားဟန်တူရဲ့၊ ပြုံးရယ်လိုက်တယ်။
“မေမေ၊ မီးကို ကိတ်မုန့်လေး ထည့်ပေးပါ” မိန်းကလေးက ထသွားတော့မလို ဟန်ပြင်ပြီးမှ မိန်းကလေးအမေကို ပြောပါတယ်။ မိန်းကလေးက သူ့ရဲ့အမေယူလာပေးတဲ့ ကိတ်မုန့်ပန်းကန်ထဲက တစ်ချပ်ကို ကောက်ယူပြီး ပန်းကန်လေးခံကာ စားတယ်။ ပန်းချီဆရာဆွဲနေတဲ့ ပုံတူကိုလည်း မျက်ခြေမပြတ်လှမ်းပြီး ကြည့်နေပါတယ်။
“♫ ♪ ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪”
ပန်းချီဆရာဘေးနားက စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းက ရုတ်တရက်ကြီး သီချင်းသံ ဆူဆူညံညံထွက်လာတော့ ပန်းချီဆရာ စိတ်ထဲ ဘုရားတမိတယ်။
မြတ်စွာဘုရား .......... ကျယ်လောင်လိုက်တဲ့ ဖုန်းသံပဲ ။
“ကျွန်မ ဖုန်းပြောလို့ ရမလားရှင်၊ ခဏနေမှ ပြန်ခေါ်ခိုင်းရမလား”
မိန်းကလေးက သဘောကျသွားပါတယ်၊ တခစ်ခစ်နဲ့ရယ်ပြန်တယ်၊
“ဟင်း ဟင်း ဖုန်းပြောနေတဲ့ ပုံတူလေးဖြစ်သွားဦးမယ်နော်”
မိန်းကလေးအမေက ဖုန်းပြောနေတဲ့ သမီးကို ကြည့်ရင်း ၀င်ပြောပါတယ်။ မိန်းကလေး အဖေက တော့ ပျင်းလာဟန်တူရဲ့၊ ခြံထဲ ဆင်းလိုက်ဦးမယ်လို့ ပြောကာ အိမ်ပြင်ထွက်သွားလိုက်ပြီ။
မိန်းကလေးရဲ့အသားအရောင်က နည်းနည်းလေး ဖြူဆွတ်ဆွတ်နိုင်တဲ့ အသားအရောင်မျိုး၊ အခြယ်အသမရှိ ကင်းစင်နေတဲ့ မျက်နှာက ဖွေးဖွေးဖြူနေတယ်။ အသားရောင်အတွက် ပန်းရောင်၊ အ၀ါရောင်ဖောက်တဲ့ ပန်းရောင်နဲ့ အ၀ါရောင်ဖောက်တဲ့ ပန်းရောင်ရင့်ရင့် သုံးမယ်လို့ ပန်းချီဆရာက တွေးပါတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့အသားရောင်က ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေပေမဲ့ ပန်းရောင်လေး ပြေးနေအောင်ခြယ်မယ်လို့လည်းစိတ်ကူးလိုက်တယ်။ လက်က ဆေးမခြယ်ခင်မှာပဲ မိန်ကလေးရဲ့ ပါးရိုးနေရာမှာ စိတ်ကူးနဲ့ အရောင်တွေဖြည့်ကြည့်နေပြီ။ မျက်နှာအရောင်တွေဖြည့်ဖို့ ရွေးထားတဲ့ ပန်းရောင်သုံးရောင်ထဲက ကြားရောင်ကို နဖူးနေရာမှာ ခြယ်လိုက်ပါတယ်။ အသားရောင်ခြယ်ရင် ရွေးထားတဲ့အရောင်သုံးရောင်လောက်ထဲက အရင့်ဆုံးအရောင်ကို အောက်ခံခြယ်လေ့ရှိပေမဲ့ အခုပုံမှာတော့ အုတ်ခဲရောင်အောက်ခံကို လက်နဲ့ ပွတ်ဆွဲထားတော့ အသားရောင်အရင့်အတွက်က မလိုလှဘူးလို့ ပန်းချီဆရာက ထင်မိတယ်။ နှာခေါင်း၊ ပါး၊ မေးစေ့တွေအတွက်ခြယ်တယ်။ နောက် ပန်းရောင်ပြေပြေလေးကို နဖူးထိပ်လေးတွေ နှာတံ နဲ့ ပါးမို့မို့နေရာတွေနဲ့ မေးစေ့ထိပ်လေးတွေမှာလိုက်ဖြည့်တယ်။
အင်္ကျီအတွက်ကို အသေးစိတ်မဆွဲတော့ဘူး၊ မိန်းကလေးရဲ့ ဂျာကင်ကော်လာလေးထောင်နေတဲ့ဟန် ပေါ်ရုံလေးပဲ ငုဝါရောင်ဆေးခြယ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မျက်လုံးအရောင်အတွက် .. မျက်လုံးကိုဆွဲတဲ့အခါ အနက်ရောင်ကို သတိထားပြီးဆွဲပါတယ်။ သိပ်များသွားရင် အရုပ်တစ်ရုပ်လို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ မျက်လုံးအပေါ်လိုင်းအတွက် နည်းနည်းထင်းအောင်ဆွဲပေမဲ့ အောက်ခံလိုင်းကိုတော့ သိသာအောင်မဆွဲပါဘူး၊ သဘာဝမှာကိုက မျက်လုံးတစ်စုံရဲ့ အောက်မျက်ခမ်းလိုင်းတွေက မမြင်ရသလောက်ပဲ၊ ပုံတူရေးဆွဲတဲ့အခါ သဘာဝအတိုင်းအနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးနေတာမို့ ပန်းချီဆရာ သတိထားပြီး ဆွဲပါတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ မျက်လုံးတွေမှာ အေးစက်စက်အရိပ်တွေပဲ တွေ့ရတယ်။ ပန်းချီဆရာက မိန်းကလေးရဲ့ မျက်လုံးပုံတူအတိုင်း ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ မျက်လုံးထဲကို အလင်းစဖြူဖြူလေးတွေဖြည့်တယ်။ မျက်လုံးက သဘာဝကျကျ အရည်လဲ့လာပြီ၊ ဒါပေမဲ့ အေးစက်မှုက ပျောက်မသွားပါဘူး။
မျက်ခုံးကိုဆွဲတဲ့အခါ မိန်းကလေးက ခါးရှေ့ကိုင်းပြီး သေသေချာချာကြည့်တယ်။
“ခင်ဗျား မျက်ခုံးက ထောင့်ချိုးပြီး အပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့မျက်ခုံးမျိုးပဲ၊ ကျွန်တော်တော့ ဒီလိုမျက်ခုံးမျိုးဆွဲရတာ သိပ်ကြိုက်တယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ထင်တယ်ဗျ”
ပန်းချီဆရာက ဗြောင်ကျကျ ချီးမွန်းလိုက်တော့ မိန်းကလေးက မျက်ခုံးလေးတွေကို လက်ထိပ်လေးတွေနဲ့ အသာအယာတို့ထိပြီး ရှက်ပြုံးလေးပြုံးလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းပုံကို ဆွဲတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ ခပ်မဲ့မဲ့ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းပုံစံကို ပန်းချီဆရာ အမိအရပုံဖော်ပါတယ်။ နဂိုနှုတ်ခမ်းသားအရောင်အတိုင်းဖြည့်တယ်။ ပန်းချီဆရာ ဆေးမှုံတွေကို မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။ ပုံကို နည်းနည်း ခွာကာ ကြည့်လိုက်တယ်၊ ခေါင်းကို နောက်ဆုတ်ကြည့်တယ်။ မိန်းကလေးနှုတ်ခမ်းတွေအတိုင်းပဲ၊ ပုံတူက မိန်းကလေးရဲ့ တင်းမာခက်ထန်တဲ့ အပြင်က မျက်နှာအသွင်အပြင်အတိုင်းပဲ၊ ခုနက ရှက်ပြုံးပြုံးနေတဲ့ မိန်းကလေးမျက်နှာက ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ စိတ်ညစ်ညူးဟန်တွေ ပြည့်နှက်လာတယ်။ ပန်းချီဆရာ အဲဒါကို သတိထားလိုက်မိပါတယ်။
“ဟို ... ဟိုလေ ..ရှင် နည်းနည်းပိုပြီး ပြုံးရယ်အောင်ဆွဲပေးလို့ ရနိုင်မလား၊ မဲ့နေ သလိုပဲ” မိန်းကလေးရဲ့ အသံက တိုးတိုးလေးပဲ၊ မ၀ံ့မရဲနဲ့ ပန်းချီဆရာကို မေးပါတယ်။
မိန်းကလေးရဲ့ .. ဒါ ပုံတူလေကွဲ့ .. မင်းလေး အသက်ဝင်တဲ့ အပြုံးမျိုးလေး ပြုံးကြည့်ပါတော့လား၊ စိတ်ပါလက်ပါလေးပေါ့၊ အူလှိုက်သည်းလှိုက်ပြုံးပြကြည့်ပါဦး၊ ပန်းချီဆရာ စိတ်ထဲတွေးလိုက်တယ်။ နှုတ်ကတော့ ...
“အဲဒီလို ခပ်မဲ့မဲ့ဟန်ကိုက ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတာပေါ့ဗျာ” လို့ပဲ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ပန်းချီဆရာကြိုးစားပြီး ပြုံးရယ်တဲ့နှုတ်ခမ်းလေးဖြစ်အောင် ဆွဲလိုက်တယ်။ နှုတ်ခမ်းထောင့်ချွန်းလေးတွေကို အပေါ်ကို ခပ်ကွေးကွေးတက်သွားအောင် ဆွဲကြည့်တယ်။ ပြုံးရယ်တဲ့အခါ ပေါ်လာတတ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနားက အရိပ်လေးတွေကို ပုံဖော်ပါတယ်။ နည်းနည်းလေး ပိုပြီး ပြုံးလာပါတယ်။ မိန်းကလေး ကျေနပ်သွားတယ်။ အပြင်က မိန်းကလေးထက် ပုံတူမိန်းကလေးက ပြုံးသယောင်ယောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့ နူးညံ့မှုတွေတော့ ပျောက်ကွယ်နေဆဲပဲ၊ ဒါကို မိန်းကလေးက သတိမထားမိပါဘူး၊ ပန်းချီဆရာကတော့ သိနေခဲ့တယ်။
နောက်ထပ် ... မိန်းကလေးရဲ့ ဆံပင်တွေ .. မိန်းကလေးရဲ့ဆံပင်တွေကို အနက်ရောင် စတင်ခြယ်သတဲ့အခါမှာတော့ ...
“ကျွန်မ အုတ်ခဲရောင် ဆံပင်ကို သဘောကျလိုက်တာရှင်၊ အဲဒီအတိုင်းပဲ ထားလိုက်ပါလား၊ ကျွန်မဆံပင်ကို အုတ်ခဲရောင်ပြောင်းဦးမှပဲ” လို့ ဆိုတယ်။
အိုး ... မိန်းကလေးနှယ်၊ သဘာဝကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပုံဖော်နေကာမှ မင်းလေးက ပုံထဲက ဆေးရောင်အတိုင်း ပြောင်းလဲချင်သတဲ့၊
“ဟုတ်ပါတယ်ရှင်၊ ပုံတူတော့ ပုံတူပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ အဲဒီ အုတ်ခဲရောင်ဆံပင်ကို သဘောကျလို့ပါ”
“ဒါဆို ကျွန်တော် ခင်ဗျားဆံပင်အရောင်အတိုင်း မခြယ်ရတော့ဘူးပေါ့”
“ဟုတ်ကဲ့ .. ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီအတိုင်းလေးထားပေးပါလား၊ highlight တော့ သဘာဝကျကျပေါ့ရှင်၊ ဆံပင်အရောင်ပြောင်းလိုက်တာတစ်ခုပဲ”
ပန်းချီဆရာ က အုတ်ခဲရောင်နောက်ခံမှာ ဆံစတွေကို နည်းနည်းအသေးစိတ် ပုံဖော်ပါတယ်။ အုတ်ခဲရောင်နောက်ခံမှာ အနက်ရောင် ဆံပင်သားတချို့ပါတယ်ဆိုရုံလေး လိုက်ဖြည့်ပါတယ်။ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ နည်းနည်းတို့ထိပြီး ပွတ်လိုက်တယ်။ အလင်းစလေးတွေထည့်တယ်။ မိန်းကလေးပြောတဲ့ highlight ပေါ့ဗျာ။
“ခဏ.. ခဏလေး .. ဆံပင်ကို နည်းနည်းပိုရှည်ရှည်လေး ဆွဲပေးပါလားရှင် ကျွန်မ ဆံပင်ရှည်တာ ကြိုက်လို့ပါ”
ပန်းချီဆရာက အုတ်ခဲရောင် pastel ချောင်းနဲ့ ဆံပင်အောက်ခြေတွေကို ခပ်ရှည်ရှည်ဆွဲချလိုက်တယ်။ မိန်းကလေးက ကျေနပ်သွားပါတယ်။ အလိုကျဟန်၊ အလိုမကျဟန်တွေ ရောစွက်နေတဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ ပြုံးရယ်ပြီး ခေါင်းလေးစောင်းငဲ့ကာ ပုံတူကိုကြည့်ပါတယ်။
“သိပ်လှတာပဲ၊ ဟို .. ပုံတူကိုပြောတာပါရှင်၊ ရှင် ဆွဲပေးတဲ့ ပုံတူကိုပြောတာပါ” မိန်းကလေးက ရှက်ပြုံးလေးပြုံးတယ်။
အပြင်မှာ နေရောင်အလင်းစတွေ နည်းပါးသွားပြီ၊ ပန်းချီဆရာရဲ့ ပုံတူဆွဲတဲ့ သတ်မှတ်ချိန် လေးဆယ့်ငါးမိနစ်ထက်တောင် ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီ၊ ပန်းချီဆရာက ပုံတူပန်းချီကား ကို မိန်းကလေးလက်ထဲ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ မိန်းကလေးနဲ့ မိန်းကလေး အဖေ၊ မိန်းကလေး အမေ သုံးယောက်သား ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီး ကြည့်ကြတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ အဖေက “သိပ်တူတာပဲ၊ သမီးလေးက ပြုံးနေတာပဲ၊ ဆံပင်အရောင်လည်း အဆန်းနဲ့ သိပ်လှတာပဲဟေ့၊ တော်လိုက်တဲ့ ပန်းချီဆရာလေး” လို့ ပန်းချီဆရာကို ချီးမွမ်းလိုက်ပါတယ်။
ပန်းချီဆရာကတော့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ပဲ ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းတယ်။
“ကျွန်တော်ပြန်ဦးမှပဲ၊ ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ” လို့ မိန်းကလေးကို စိုက်ကြည့်ပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ပန်းချီဆရာ အိမ်လေးထဲက ထွက်ခွာခဲ့တယ်။ တကယ်ဆို အပြင်က မိန်းကလေးနဲ့ မတူတဲ့ မိန်းကလေးအကြိုက် ပုံတူတစ်ပုံ ပန်းချီဆရာဆွဲဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့၊ မတူတဲ့ ပုံတူတစ်ပုံအတွက် ပြုံးရယ်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြမယ်ဆိုလည်း ... ပန်းချီဆရာ ၀မ်းသာကြည်နူးရမှာပါပဲ ...
လမ်းမထက်မှာ .... ပန်းချီဆရာ ...
ခြေလှမ်းတွေ ခပ်ကျဲကျဲလှမ်းလို့ ...
တစ်ကိုယ်တည်း အူလှိုက်သည်းလှိုက် ပြုံးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ။
11:16 AM ဟိုဟို ဒီဒီ No comments
နှစ်သစ်မှာ အားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
1:40 AM ပင်ကိုရေးဝတ္ထုတို, စောင့်နေတဲ့ကြောင်လေး9comments
2:42 AM ပထမဆုံးအိပ်မက်, အက်ဆေ3းcomments
မီးရောင်စုံတွေလှည့်ပတ်ပြေးဆော့နေတဲ့ စင်ရှေ့မှာ ပရိတ်သတ်တွေက စည်းချက်ညီညီ လှုပ်ရှားယိမ်းထိုးနေကြသည်။ ပရိသတ်တွေ ပြည့်သိပ်လို့နေပြီ။
~ ငါနိုးထခဲ့ မနက်တွေမှာ သံပတ်ပေးသလို မင်းအနားရောက်ရှိချင်တာ
နင်နဲ့ဝေးရာ ခြေဦးလှည့်ဖို့တွေးလိုက်တိုင်း ငါတွေဝေမိခဲ့တာ ~
~ စကားလုံးတို့ အနှုတ်သဘောဆောင်ဆဲ ဆုံတွေ့တိုင်းမှာ လမ်းကြောင်းမှားယွင်းနေတယ်
လာတိုက်စားနေ ငါတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကို နာကျင်စေလို့ ~
သီချင်းစာသားတွေကို စပြီးဆိုလိုက်တဲ့အချိန် ရင်ထဲမှာ စူးကနဲပြင်းပြင်းတစ်ချက်နာသည်။ နှလုံးထဲကများလား ..
သောက်ထားတဲ့ဆေးကိုစ့်ကုန်ပြီလေ၊ စာမေးပွဲအပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားသွားဖူးပြီးအပြန်လမ်းမှာ ကျွန်တော့်နှလုံးထဲမှာ ကောက်ကာငင်ကာ နာလာခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်တော့်ကိုစာသင်ပေးတဲ့ ဒေါက်တာခင်မောင်ဦးက နှလုံးဆေးတွေပေးသည်။ အခု ဆေးထပ်သောက်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်နေကောင်းနေပါပြီ၊ ကျွန်တော် ရှင်သန်ချင်သေးသည်။ ကျွန်တော်သိပ်ချစ်တဲ့ သီချင်းတွေသီဆိုဖို့၊ သီချင်းတွေရေးစပ်ဖို့၊ သံစဉ်တွေရှာဖွေဖို့ ကျွန်တော် အချိန်တွေအများကြီး ပိုင်ချင်ပါသေးသည်။ ခွင့်ပြုပါဖေဖေ ....
ကျွန်တော် ဖေဖေ့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့အချိန်တွေအများကြီးပဲ ပေးခဲ့ပြီလေ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေ .. သူတို့ကို ကျွန်တော်သိပ်ချစ်သည်။ ကျွန်တော့်အတ္တအတွက်သက်သက် ကျွန်တော်သီချင်းတွေ ဖန်တီးခဲ့တာပါပဲ၊ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာ ပရိတ်သတ်အတွက်ဆိုတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ခံစားမှုက ကျွန်တော့်ရင်မှာ ပြင်းရှရှ မွှေနှောက်လို့နေပြီ၊ ဖေဖေ့ကို ချစ်သလို၊ မေမေ့ကို ချစ်သလို၊ သီချင်းတွေကို ချစ်သလို၊ ကျွန်တော့်ရဲ့လူနာတွေကိုချစ်သလို ကျွန်တော့်သီချင်းတွေကိုနားထောင်ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကိုလည်း အခု ကျွန်တော်သိပ်ချစ်သည်။ “လူနာတွေကို နောက်ဆုံးမှချစ်တာလားကွ” လို့ ဖေဖေကတော့ အပြစ်တင်နေဦးမလားပဲ။
ပရိတ်သတ်တွေက လှိုင်းလုံးကြီးပမာ တလိမ့်လိမ့်လှုပ်ခါနေကြသည်။ ကောင်းကင်ကြီးကို မော့ကြည့်မိသည်။ ကြယ်ရောင်တွေမရှိပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာတော့ ရောင်စုံအလင်းတွေ လှည့်ပတ်ပြေးဆော့နေသားပဲ၊ ရင်ထဲမှာ ဆိုနင့်ကာ မျက်ရည်တစ်ပေါက် ပါးပြင်ပေါ်က လိမ့်ကနဲပြေးဆင်းသွားသည်။“မေမေ မငိုပါနဲ့ မေမေ့မျက်ရည်တစ်စက်မြင်ရရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ခြေထောက်တွေ ခွေယိုင်လဲကျမတတ်ပဲ၊ မေမေ့မျက်ရည်က ကျွန်တော့်အတွက် အရှုံးတွေကိုဖန်တီးသလို၊ မေမေ့အပြုံးက ကျွန်တော့်အတွက်ဒိုင်းလိုပဲ၊ ကျွန်တော့်ဆီပြေးဝင်လာမယ့်ဒုက္ခတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပဲ၊ ဒါကြောင့် မေမေ မငိုပါနဲ့နော်” လို့ ကျွန်တော် အခါခါပြောရင်း မေမေ့ကိုအားပေးခဲ့ဖူးသည်။ ငိုတာမကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်ကြောင့် မေမေကိုယ်တိုင်လည်း မျက်ရည်တစ်စက်မှ မကျအောင်နေပြခဲ့ရှာသည်။ ကျွန်တော်ရော မေမေပါကြိုးစားခဲ့ကြပါသည်။ အခု ကျွန်တော့်ပါးပေါ်မှာ မျက်ရည်စတွေပြည့်နေပြီ။ ဖေဖေ .. ကျွန်တော် ဖေဖေ့ကို သတိရလိုက်တာ၊ ကျွန်တော်နဲ့ အခု ကျွန်တော့်ရဲ့ပရိတ်သတ်လှိုင်းလုံးကြီးကို ဖေဖေမြင်တွေ့နိုင်ခဲ့ရင် .. ဖေဖေဘယ်လိုများပြောမလဲ၊ “ဖေဖေ စိတ်မကောင်းပါဘူး သားရယ်၊ ဖေဖေ သားကို ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့တာတွေအတွက် သား ဖေဖေ့ကို နားလည်ပါကွာ” လို့များ ဖေဖေပြောလေမလား။
~ ကြယ်ရောင်တွေ ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီ ဒီညများ ရင်ခုန်သံတွေ ရှုံးန်ိမ့်ပြီ နင်မေ့ထား
~ အရင်ချိန်တွေကို သတိရလေ ရင်မှာပိုခံစားရလေ
~ ငါ အခုထိ မလွတ်မြောက်ခဲ့ ... ဒီနှောင်ကြိုး တွေ
chorus ပိုဒ်ကို စလိုက်တာနဲ့ ပရိတ်သတ်လှိုင်းလုံးကြီးက ပိုပြီး လှုပ်ရှားလာကြပြီ၊ ပရိသတ်တွေ သံပြိုင်လိုက်ဆိုကြသည်။ မျှော်စင်ကျွန်းတစ်ခုလုံးမှာ “နှောင်ကြိုး” သီချင်းသံတွေ ပြည့်လျှံကုန်ကြပြီ၊ ကျွန်တော့်သွေးကြောထဲမှာ ဂီတသံတွေ အလုအယက်စီးဝင်နေကြပြီ၊ ပရိသတ်တွေနဲ့ ကျွန်တော် နှောင်ကြိုးအထပ်ထပ်ရစ်ပတ်မိကုန်ကြပြီ၊ သီချင်းသံတွေနဲ့ ညသည် ခမ်းနားလွန်းလှသည်။ ဒါ ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၆နှစ်ကျော်ဘ၀ထဲက လိုချင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပဲ။
သီချင်းအဆုံး ပရိတ်သတ်တွေကို နှုတ်ဆက်ပြီး ဂစ်တာကိုလွယ်ရင်း စင်ပေါ်က အပြေးဆင်းလာခဲ့ချိန်မှာ စင်ရှေ့မှာ “တေဇာ တေဇာ တေဇာ” ဆိုတဲ့ ညာသံပေးအော်ဟစ်သံတွေဆူညံကုန်သည်။ စင်အောက်မှာ အမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းမယ့် လူငယ်လေးတွေ အလုအယက်တိုးဝှေ့နေကြသည်။ ဒေါက်တာတေဇာမိုးယံဟာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ မိန်းကလေးပရိတ်သတ်တွေများလှသလို ယောက်ျားလေး ပရိတ်သတ်တွေလည်း အများကြီးပဲ၊ ကျွန်တော့်အနားမှာရှိနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဟန်နီက အလှဆုံးပြုံးလို့ ကြည့်နေသည်။ မေမေ .. မေမေ့ဆီကို ဖုန်းခေါ်လိုက်သည်။
“မေမေ .. စင်ရှေ့မှာ လူတွေအများကြီးပဲ၊ ကျွန်တော် ပျော်လိုက်တာ၊ အခု ကျွန်တော့်ဘေးမှာလည်း ပရိတ်သတ်တွေ အများကြီးပဲ၊ မေမေ နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ လိုက်ကြည့်ရမယ်၊ မေမေ့ကို ပြချင်လိုက်တာ .. ကျွန်တော့်ပရိတ်သတ်တွေကို .. ဖေဖေ့ကိုလည်း မြင်စေချင်လိုက်တာ ..” အဆုံးမှာ ကျွန်တော့်စကားသံတွေ တိမ်ဝင်သွားသည်။ မျက်ရည်တွေက ပါးပြင်ပေါ်မှာ သွေ့ခြောက်ခါစ ... ဟန်နီကမ်းပေးလိုက်တဲ့ ရေဗူးလေးကို မော့သောက်ရင်း မျက်နှာပေါ်လောင်းချလိုက်သည်။ ကျွန်တော်ငိုတာ ဘယ်သူမှ မမြင်စေချင်ပါ။
“တေဇာ .. ငါ တို့ ပြန်ရအောင်နော်၊ အန်တီတစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာ၊ ငါလည်း အိမ်ပြန်နောက်ကျနေမယ်” ဟန်နီက ခပ်တိုးတိုးဆိုသည်။
“အောင်မလေးကွာ များလိုက်တဲ့ပိုးကောင်တွေ၊ မီးတွေက ထိုးလေ၊ ပိုးစိမ်းကောင်တွေကလာလေ၊ ဟား ဟား ဟား...”
“လူတွေကလည်းများပါတယ်ကွာ၊ စင်အောက်မှာ၊ သေမယ်ဆိုသေလို့ရပြီ”
“ဘယ်မလဲ တေဇာ ဘယ်ရောက်သွားလဲ၊ ဒီကောင်အတီးမပြီးသေးဘူး ဆင်းပြေးတာပဲ” တစ်ယောက်တစ်ပေါက်စကားသံတွေနဲ့အတူ အဖွဲ့သားတွေပါ အနားကို ရောက်လာကြသည်။ လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်ကြသည်။ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ Silence of Scream အဖွဲ့သားတွေအားလုံးနဲ့ပါ ဓါတ်ပုံအတူတွဲရိုက်ကြသည်။ မျှော်စင်ကျွန်းစင်မြင့်တ၀ိုက် မီးတွေ မှိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ကန်တော်ကြီးထဲက ပျော်ရွှင်တက်ကြွစွာ ထွက်ခွာခဲ့ကြတော့သည်။
~ မမ တ သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ....
မမတ -----------~ ”
~ မေမေ ... ကျေးဇူးပါမေမေ --------- ~
ကျွန်တော် စကားတတ်ပြီဆိုတာနဲ့ သီချင်းတွေတစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ်အော်ဆိုတတ်ခဲ့သည်။
“တေဇာကွာ တော်တော်ဟုတ်တဲ့ကလေး” လို့ ဖေဖေကဆိုသည်၊ ဖေဖေ့ လွှမ်းမိုးသီချင်းခွေကို ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီး သီချင်းတွေ မပီတပီ အော်ဟစ်သီဆိုခဲ့တုန်းက ဖေဖေက တဟားဟားရယ်မောရင်း သဘောတွေကျနေခဲ့ပါသည်။ ဖေဖေ့သီချင်းခွေတွေဖွင့်ပြီး တစ်ပုဒ်မကျန်လိုက်ဆိုခဲ့ဖူးသည်။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက သီချင်းတွေနားထောင်ရတာကြိုက်လှသည်။ သီချင်းဗီဒီယိုခွေတွေ မေမေက ၀ယ်ပေးထားခဲ့သည်။ ထုံချိုင်းဗီဒီယိုခွေတွေလည်း ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ခဲ့တာပဲ၊ ထုံချိုင်းကတဲ့အတိုင်းလည်း လိုက်ဆိုသည်။ လိုက်ကသည်။ တခါ ထုံချိုင်းသီချင်းဗီဒီယိုခွေတွေ ဖွင့်နားထောင်နေတဲ့အချိန် တီဗီရှေ့က ဖေဖေ ဖြတ်အသွား ... ခဏလေးဖြတ်သွားတဲ့ အချိန်ကိုတောင် မစောင့်နိုင်လို့ ခေါင်းစောင်းပြီး ကြည့်ခဲ့သေးရဲ့၊ ဒါကို ဖေဖေကသိသွားတော့ တီဗီရှေ့မှာ ကာပြီး ကျွန်တော့်ကို စနောက်ခဲ့သေးသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ အော်ဟစ်ငိုယိုတော့တာပေါ့၊ တော်တော်လည်း အစအနောက်သန်တဲ့ ဖေဖေပါပဲ။
တစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ ဖေဖေ့သူငယ်ချင်းအိမ်ကို အလည်သွားကြတုန်းက အဲဒီအိမ်က မမတွေဖွင့်ထားတဲ့ New Kids On The Block ဗီဒီယိုခွေကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်သဘောအကျကြီးကျခဲ့သည်။ အိမ်ရောက်တော့ ဖေဖေ့ကိုပူဆာတော့ ဖေဖေ ချက်ချင်းပဲ အဲဒီအိမ်ကိုသွားပြီး အခွေကိုငှားပေးခဲ့ပါသည်။ အခွေကိုဖေဖေက ကူးပေးခဲ့သည်။ အခွေလည်းရရော သီချင်းခွေထဲကအတိုင်း ဟန်လုပ်လိုက်ဆိုတော့တာပါပဲ၊ သီချင်းတိုင်းက ကျွန်တော့်အတွက် ပျော်စရာ စိတ်ဝင်စားစရာတွေအပြည့်ပဲကိုး၊ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ဂစ်တာလေးလည်းရှိသေးသည်။ ကစားစရာ ဂစ်တာလေးပါ၊ ဖေဖေ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်ပြီး ပြန်လာတဲ့အခါ ဂစ်တာလေးဝယ်လာခဲ့သည်။ အဲဒီဂစ်တာလေးဝယ်လာပေးခဲ့တုန်းက ဂစ်တာလေးနဲ့ပဲ တစ်ချိန်လုံးဆော့ကစားနေခဲ့တာ မှတ်မိသေးသည်။
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ဆော့လည်းအင်မတန်ဆော့ပါသည်။ စစ်သားရုပ် အရုပ်သေးသေးလေးတွေနဲ့ လက်နှစ်ဘက်မှာ တစ်ရုပ်စီကိုင်ပြီး နှုတ်က ရှီး .. ရှဲ အော်ပြီး စစ်တိုက်ကြပုံမျိုးလည်းဆော့တတ်သေးသည်။ အဲဒီလို ဆော့ရတာမောလာတဲ့အခါ စူပါမင်းလုပ်ပြီး စားပွဲပေါ်ကလည်း ခုန်ချတတ်ပါသည်။ တစ်ကြိမ်မှာတော့ ကျွန်တော် ခုန်ချတဲ့အချိန် အကျမတော်ဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းပေါက်သွားခဲ့ဖူးသည်။
နွေနေပူပူ ချွေးပြန်အောင် ဆော့ထားတဲ့အရှိန်ကြောင့် နှုတ်ခမ်းပေါက်ရုံလေးပဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ချက်ချင်းပဲ ပါးစပ်ထဲမှာ သွေးတွေပြည့်လျှံသွားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်လန့်ဖြတ်ပြီး အော်ဟစ်ငိုယိုတော့ မေမေက ဟင်းချက်ရာက ပြေးလာကြည့်သည်။ အသည်းငယ်လှတဲ့ မေမေ ရုတ်တရက်ကြီးသွေးတွေနဲ့ကျွန်တော့်ကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ မေ့လဲကျသွားခဲ့သည်။ အနားကိုဘယ်အချိန်ဖေဖေရောက်လာလိုက်မှန်းမသိ၊ ဖေဖေ့ခမြာ လက်တစ်ဘက်က ကျွန်တော့်ကို ချီထားကာ မေမေ့ကို တစ်ဘက်ကမနိုင်မနင်းပွေ့ထားပြီး “သား သား”လို့လည်း အော်သည်၊ မေမေ့ကိုလည်း တတွတ်တွတ်ခေါ်သည်၊ အလယ်မှာ အရူးတစ်ပိုင်းပြာယာခတ်နေခဲ့တဲ့ ဖေဖေ့ပုံရိပ်တွေကို မှုံဝါးဝါးပြန်မြင်ယောင်ရင်း ကျွန်တော် ဖေဖေ့ကို သနားကြင်နာစွာ သတိရမိသည်။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကိုလည်း ကျွန်တော် အင်မတန်ကြိုက်ပါသည်။ မိုက်ကယ်ရဲ့ သီချင်းတွေ၊ မိုက်ကယ်ရဲ့ အကတွေကိုကြိုက်ရုံတင် မဟုတ်ပဲ၊ မိုက်ကယ်ရဲ့ ဆံပင်စတိုင်လ်အတိုင်းထားချင်ခဲ့သည်တဲ့၊ ကျွန်တော်သိပ်မမှတ်မိတော့တဲ့ ကိစ္စတွေကို မေမေက သေသေချာချာပြန်ပြီး ပြောပြတတ်ပါသည်။ မိုက်ကယ်ရဲ့ဆံပင်အတိုင်း အုန်းဆီလိမ်းပြီး နဖူးရှေ့ကို ဆံပင်အချောင်းလေးချခိုင်းခဲ့သည်လို့ ဆိုသည်။ မေမေဖြီးပေးတဲ့အခါ တခါတရံ တစ်ခါတည်းနဲ့ စိတ်တိုင်းကျသွားတဲ့အခါလည်း ရှိခဲ့သည်တဲ့၊ စိတ်တိုင်းမကျတဲ့အချိန်ဆို “မတူသေးဘူး၊ အချောင်းတစ်ချောင်းချပေး ..အချောင်းတစ်ချောင်းချပေး.. အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး” လို့ အော်ဟစ်ငိုယိုတတ်သေးသည်။
ဖေဖေဖြီးပေးတဲ့အခါမှာတော့ မြန်မြန်စိတ်တိုင်းကျသွားတတ်သည်လို့ မေမေကပြောပါသည်။ ရေချိုးတဲ့အခါမှာလည်း ကျွန်တော် အင်မတန်ဂျီကျတတ်ခဲ့သေးသည်။ ရေမချိုးခင် အင်္ကျီချွတ်ခိုင်းလို့ မရ၊ ရေချိုးမယ်လို့ မေမေက ခေါ်တဲ့အခါ ကျွန်တော် ရေမချိုးချင်လို့ အင်္ကျီမချွတ်ဘူးလို့ ငိုတတ်သေးသတဲ့၊ တကယ်တမ်း မေမေက အင်္ကျီအတင်းအကျပ်ချွတ်ခိုင်းပြီး ကျွန်တော် ရေချိုးလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့လည်း ရေချိုးတာမရပ်ချင်တော့ပြန်ဘူးတဲ့၊ ရေချိုးပြီး အင်္ကျီဝတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာလည်း မေမေ နောက်တစ်ကြိမ် ဒုက္ခကြုံရပြန်သည်။ “အင်္ကျီမ၀တ်ဘူး၊ ဒီအတိုင်းပဲနေမယ်၊ ဒီအတိုင်းပဲနေမယ်” လို့ဆိုသတဲ့၊ မျက်နှာလေးရဲရဲနီကာ မျက်ခွံတွေ မို့ဖောင်းလာတဲ့အထိ ငိုတတ်ခဲ့သေးသည်တဲ့၊ အဲဒီအချိန်ဆို မေမေက ခပ်သာသာလေးရိုက်တတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ကို မေမေရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဖေဖေကကျွန်တော့်ကိုချီပြီး တစ်နေရာရာကို ခေါ်သွားလေ့ရှိသည်။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်နဖူးရှေ့မှာ လက်ဖ၀ါးကိုချိန်ရွယ်ထားပြီး “တွေ့လား တွေ့လား” လို့လည်းပြောသတဲ့၊ ကျွန်တော်လိုချင်တာတစ်ခုခု မြန်မြန်လုပ်ပေးရင်လုပ်ပေး မဟုတ်ရင် နဖူးကိုဖတ်ကနဲရိုက်ကာ ခြိမ်းခြောက်တတ်သည်။ ဖေဖေ သို့မဟုတ် မေမေက ကျွန်တော်လိုချင်တာ မြန်မြန်လုပ်ပေးရသတဲ့၊ မြန်မြန်လုပ်မပေးခဲ့ရင်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့နဖူးလေးဟာ ရဲရဲနီလို့ပေါ့၊ အဲဒီရုပ်လေးက သနားစရာ ချစ်စရာကောင်းလှသည်လို့ မေမေက ပြောပြပါသည်။
ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်လေးကတည်းက သီချင်းတွေကို ဂရုစိုက်ခဲ့သလို ကျောင်းစာကိုလည်း မပျက်မကွက်ဂရုစိုက်ခဲ့သည်။ တချို့ မေမေတွေလို စာကျက်ဖို့ တိုက်တွန်းစရာမလိုပဲ စာသိပ်မကြည့်ဖို့ အနားယူဖို့သာ မေမေက ပြောခဲ့ရသည်တဲ့၊ မေမေက “သားလေးရယ် နားပါဦး၊ စာပဲကြည့်နေတာပဲ” ပြောတဲ့အခါတိုင်း “မေမေကလည်းဗျာ၊ သူများအမေတွေနဲ့ကွာလိုက်တာ၊ စာမကြည့်ဖို့များပြောရတယ်လို့” ကျွန်တော် အဲ့ဒီလို ပြန်ပြီးစောဒကတက်ခဲ့ပါသေးသည်။ ကျွန်တော်နည်းနည်းအသက်ကြီးလာတော့ ဂစ်တာဝယ်ပေးဖို့ ပူဆာတဲ့အခါမှာတော့ နဖူးရှေ့လက်ဖ၀ါးလေးပြလို့ ခြိမ်းခြောက်စရာမလိုတော့ပါဘူး၊ ရှစ်တန်းအောင်စာရင်းထွက်အပြီးနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ဖေဖေက ကျွန်တော့်စိတ်ကြိုက်ဂစ်တာလေးတစ်လုံး မြောက်ဥက္ကလာဘက်က ဂစ်တာလုပ်တဲ့ဖေဖေ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီမှာ မှာပေးခဲ့သည်။ ဂစ်တာလေးရလာတဲ့နေ့ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အပျော်ရွှင်ဆုံးနေ့တွေဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဂစ်တာတီးတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သီချင်းတွေစပ်သည်၊ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရတိုင်းမေမေ့ကို ဆိုပြတတ်ခဲ့သည်။ ဖေဖေကတော့ ပက်လက်ကုလားထိုင်ကြီးမှာ ထိုင်ပြီး နားထောင်တတ်ပါသည်။
ငယ်ငယ်က ဖေဖေ့ပုံရိပ်တွေအားလုံးကို ကျွန်တော် ပီပီသသ မမှတ်မိတော့ပါဘူး၊ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးခဏခဏထွက်ရတဲ့ဖေဖေက ကျွန်တော့်မြင်ကွင်းထဲကနေ ရက်အတော်ကြာကြာ ပျောက်ပျောက်နေတတ်ခဲ့သည်။ ဖေဖေခရီးက ပြန်လာရင်တော့ ကျွန်တော့်အတွက် မုန့်တွေ၊ ကစားစရာတွေ အများကြီးပါလာတတ်သည်။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အတန်းတိုင်းမှာ ပထမရလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော် ၁၀တန်းအောင်တော့လည်း ၆ဘာသာလုံး ဂုဏ်ထူးပါခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အောင်စာရင်းကြည့်ပြီး ပြန်လာတော့ အိမ်ပေါက်ဝမှာ စောင့်နေတဲ့ ဖေဖေ ကို “အောလ်ဒီ” လို့ ပြောရင်း လက်မထောင်ပြလိုက်သည်၊ ဖေဖေက “သားရာ တော်လိုက်တဲ့ ဖေဖေ့သား၊ သားအတွက် ဖေဖေ ဘာမဆိုဖြစ်စေရမယ်၊ ဖေဖေ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ပိုက်ဆံတွေရှာဦးမှာပဲ၊ ဆရာဝန်ကြီးတေဇာမိုးယံ ဖေဖေ့သားပေါ့ကွ” လို့ အသံဝါကြီးနဲ့ ဖေဖေက အားရ၀မ်းသာဆိုရှာသည်။ ဖေဖေ့စကားအဆုံးမှာ “ကျွန်တော် က အဆိုတော်ပဲလုပ်ချင်တာ” လို့ စကားသံခပ်တိုးတိုးဆိုခဲ့သည်။ ဖေဖေ့ရဲ့ပြုံးနေတဲ့ မျက်နှာဟာမှုံမှိုင်းသွားလိုက်တာ၊ ဖေဖေ ဘာမှတော့ဆက်မပြောတော့ပါဘူး။
ကျောင်းလျှောက်လွှာတွေတင်ရတော့မယ့်တစ်ညမှာ ဖေဖေ မေမေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အပြင်းအထန်မဟုတ်တောင် အကြိတ်အနယ်စကားပြောခဲ့ရသည်။ အဲဒီညက ဖေဖေ့ပုံရိပ်တွေကိုတော့ ကျွန်တော့်တသက်လုံး စွဲမြဲစွာ မှတ်မိသွားတော့မည်ထင်ပါသည်။ ဖေဖေ အင်မတန်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခဲ့သည်။ ဖေဖေ့ရဲ့ ဒေါသတကြီးဟန်ပန်ကို ကျွန်တော့်တသက်လုံး မှတ်မိသလောက် မတွေ့ခဲ့ဖူးပေမဲ့ အဲဒီတုန်းက ဖေဖေ ဒေါသတွေကြီးနေခဲ့ပါသည်။ ဖေဖေက “ဘာမှစဉ်းစားနေစရာမှ မလိုပဲကွ၊ ဆရာဝန်လိုင်းပဲယူရမှာပေါ့” လို့ အော်ဟစ်ခဲ့သည်။
“မဟုတ်ဘူးဖေဖေ၊ သားသိတယ်၊ ဆရာဝန်လိုင်းယူလိုက်ရင်၊ သား စာတွေနဲ့ပဲ နပန်းလုံးနေရမှာ သီချင်းဆိုဖို့ သီချင်းစပ်ဖို့ အချိန်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး၊ အဆိုတော်ပဲလုပ်ချင်တယ်၊ အဲဒါ ကျွန်တော့်ရဲ့အိပ်မက်ပဲ”
“သားကွာ .. အိပ်မက်ဆိုတာ အိပ်မက်ပဲ၊ နိုးလာတာနဲ့ ပျောက်သွားရတာပဲ၊ ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးမှ သီချင်းဆိုလည်းရတာပါပဲ၊ ဆရာဝန်က အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ကွ၊ ဂုဏ်ရှိတယ်၊ လူနာတွေကို ဆေးကုပေးရတာ ကုသိုလ်လည်းရတယ်၊ ပိုက်ဆံလည်းရတယ်၊ သီချင်းဆိုတာက .....”
“အဲလိုလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ စိုင်းစိုင်းဆိုဘယ်လိုလုပ်မလည်း၊ သူအောင်မြင်တာပဲ၊ သူ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရလာတာပဲ၊ သူ့ဘ၀သူ ရပ်တည်နိုင်တာပဲ၊ လူနာတွေဆေးကုရမှာကို ကျွန်တော်သဘောကျတာပါပဲ၊ တစ်ခုပဲ၊ ကျွန်တော်သီချင်းတွေနဲ့ ဝေးသွားရမှာကြောက်တယ်၊ သီချင်းတွေက ပထမဆုံးအိပ်မက်ဖြစ်နေလို့ပါ”
ကျွန်တော် ဖေဖေ့ကို ကန့်ကွက်ပြီးပြောလိုက်သည်။
“စိုင်းစိုင်းဘယ်လိုအောင်မြင်လည်း ဖေဖေသိပ်နားမလည်ဘူး၊ သား ဆရာဝန်လိုင်းလျှောက်ရမယ်၊ ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်လာမယ့်သားကို ဖေဖေမြင်ချင်တယ်”
မေမေက လေသံအေးအေးလေးနဲ့ ဆိုရှာသည်။
“သားလေးရယ်၊ ဆရာဝန်လိုင်းပဲ လျှောက်ပါကွယ်၊ သူများတွေသိပ်ဖြစ်ချင်တာတောင် မလွယ်ပါဘူး ... နော်”
မေမေက ကျွန်တော့်ကို နားလည်စွာငေးကြည့်နေခဲ့သည်။ ဖေဖေကတော့ ပြတ်ပြတ်သားသား တင်းမာခက်ထန်နေခဲ့သည်။
အဲဒီနေ့က စပြီး ကျွန်တော် ဆေးကျောင်းလျှောက်လိုက်ပါသည်။ မန္တလေးကိုပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့တော့ မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်ကို လျှောက်ခဲ့သည်။ ဆေးကျောင်းတက်သည်။ ကျောင်းစာတွေနဲ့ပဲ ကျွန်တော့်နေ့ရက်တွေကို ကုန်လွန်ဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဂစ်တာလေးကိုတော့ ထောင့်တစ်ထောင့်မှာ ငြိမ်သက်နေစေခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်သီချင်းတွေကို ပစ်ထားလိုက်သည်။ သံစဉ်တွေကို မေ့ထားလိုက်သည်။ ဖေဖေ့ရှေ့မှာ သီချင်းမဆိုမိအောင် နေခဲ့သည်။ မေမေ့ကိုလည်း အရင်လိုသီချင်းတွေဆိုမပြတော့ပါဘူး၊ အရာရာကို စိတ်ဝင်တစားလေ့လာတတ်တဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့အကျင့်ကြောင့် ကျောင်းစာတွေမှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်တနေရာက အနာကိုတော့ ကျွန်တော်သာအသိဆုံးပါပဲ၊ ကျောင်းပွဲတွေရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ ဆေးကျောင်းကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သီချင်းဆိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆေးတက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ် တတိယနှစ်ရောက်လာတော့ ကျောင်းစာတွေမှာပျော်လာသလို ဆရာဝန်အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါသည်။ သီချင်းဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သီချင်းတွေပြန်ဆိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဖွဲ့လေးပါဖွဲ့ထားလိုက်သည်။ Silence of Scream ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လေးက ကျွန်တော်တို့နှစ်ကလုပ်ဖြစ်တဲ့ ဂီတပွဲတွေတိုင်းမှာ ဆိုဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဖေဖေ့ကိုတော့ သီချင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေ မပြောတော့ဘူး၊ ဖေဖေကလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့အဆိုတော်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒကို ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က စိတ်ကူးယဉ်မှုတစ်ခုလို့ပဲ ယုံကြည်သွားခဲ့ပုံပါပဲ။
ကျွန်တော်က ဖေဖေ့လိုပဲ အရပ်ရှည်တော့ ဖေဖေက ကျွန်တော့်ကို ကုလားအုပ်လေး လို့ နောက်ပြောင်ပြီး ခေါ်တတ်ပါသည်။ “သား ဆေးခန်းဖွင့်ရင် ဒေါက်တာကုလားအုပ် လို့ နာမည်တပ်ကွ၊ ဒါမှ ဆေးခန်းမှာ လူလာများမှာ၊ ဆရာဝန်ကအဆန်းဆိုပြီး လူနာတွေလာကြလိမ့်မယ်” လို့ ဖေဖေက စတတ်သေးသည်။ ကျွန်တော်ဆေးကျောင်းနောက်ဆုံးနှစ်မှာတော့ ကံကြမ္မာက ကျွန်တော့်ကို အပြင်းဆုံးခြောက်လှန့်ခဲ့သည်။ ဖေဖေအဲဒီညက မန္တလေးကနေ ကားနဲ့ ခရီးထွက်သွားခဲ့ပါသည်။ “ကဲ ဒေါက်တာကုလားအုပ်ရေ၊ ဖေဖေတော့လစ်ပြီ၊ ဘာမုန့်ဝယ်ခဲ့ရမလဲကွ” လို့ နောက်ပြောင်လိုက်သေးသည်။ မနက်ကျတော့ ဖုံးဝင်လာခဲ့သည်၊ ဖေဖေစီးတဲ့ကားက တိမ်းမှောက်သွားသတဲ့၊ ဖေဖေက ရှေ့ခန်းမှာထိုင်နေသည်တဲ့၊ နောက်ပိုင်း ... ကျွန်တော် မကြားရဲတော့ပါဘူး၊ ကျွန်တော်မငိုရဲခဲ့ဘူး၊ မေမေက စိတ်နုတယ်၊ ငယ်ငယ်ကတည်းက စိတ်ကြီးရင်၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုထိတ်လန့်စရာတွေ့ခဲ့ရင် မေ့လဲတတ်တဲ့ မေမေ့အကြောင်းကိုသိထားတော့ ကျွန်တော်မငိုရဲဘူး၊ ကျွန်တော်ငိုရင် မေမေပိုဆိုးမယ်၊ ကျွန်တော်ရော မေမေပါ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အားပေးပြီး ဖေဖေ့နောက်ဆုံးခရီးအတွက်အရာအားလုံး ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ပြင်ဆင်ကြရသည်။ နောက်ဆုံးနှစ်အတွက် စာတွေအပြင်းအထန်ကြိုးစားရတဲ့အချိန် ကျွန်တော် မငိုအားခဲ့ပါဘူး၊ ကျွန်တော် စာကျက်ဖို့နည်းနည်းတွေဝေလာတဲ့အချိန် ဖေဖေမြင်ချင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ပဲ စာတွေပိုပြီး ကျက်မှတ်ခဲ့သည်။ ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့မှာ မေမေ့မျက်နှာလေးက နွမ်းနေပေမဲ့ မေမေ့မျက်နှာမှာ ကျွန်တော့်အတွက် အပြုံးတွေ အဆင်သင့်ရှိနေတတ်ခဲ့သည်။
အခုတော့ ဖေဖေဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်ဆရာဝန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီ၊ ဒေါက်တာတေဇာမိုးယံ တဲ့ ....
ပြီးတော့ ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းလည်း ကျွန်တော်ကြိုးစားချင်ပါသေးသည်။ အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သေးသည်။
ဖေဖေ့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့အချိန်တွေအများကြီးပဲ ပေးခဲ့ပြီလေ၊ နောက်ကျမှ မက်ခဲ့ရတဲ့ အိပ်မက်၊ ကျွန်တော်ရဲ့ ပထမဆုံးအိပ်မက်ကို ကျွန်တော်မက်ခွင့်ရနေပြီ၊ နိုးထလျက်ပဲ ကျွန်တော် ဒီအိပ်မက်ကို မက်နိုင်ပြီ ဖေဖေ။
အခု ကျွန်တော့်ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေ .. သူတို့ကို ကျွန်တော်ချစ်သည်။ ကျွန်တော် သီချင်းတွေကိုသိပ်ချစ်သည်။
ကောင်းကင်ဘုံက ဖေဖေ ကျေနပ်နိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့၊
ခွင့်ပြုပါဖေဖေ ။ ။
(ဒီအက်ဆေးလေးကို ရေးရင်းမျက်ရည်ကျမိပါတယ်၊ တူလေးရဲ့ နှောင်ကြိုးသီချင်းလေးကို ဖွင့်နားထောင်ပြီး ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ တူလေးရဲ့တကယ့်အကြောင်းဖြစ်နေတော့ မရေးခင်အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားမိသေးတယ်။ တူလေးဖတ်မိရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တယ်၊ တူလေးနဲ့ gtalk မှာ ပြောရင်း တူလေးကို ဖွင့်ပြီးပဲ မေးလိုက်တော့တယ်။“လပြည့်အကြောင်းရေးချင်လို့(တူလေးကို ဖိုးလပြည့်လို့ခေါ်ကြတယ်။ နာမည်ရင်းက တေဇာဝေယံတဲ့) တေဇာဝေယံက နာမည်ကြီးအဆိုတော်ပေါ့ စင်ပေါ်မှာ သီချင်းဆိုနေတာကနေစပြီးရေးမယ်လေ” လို့ ပြောလိုက်တော့ တူလေးက “ဒါတော့ကြိုက်တယ်”တဲ့ နောက်နေသေးတယ်။ “မေမေမြင်ရင်တော့ shock ရှိမယ်နော်”တဲ့၊ နောက်တော့တူလေးက ပြောတယ်။ “အန်တီပရေ တကယ်တော့ သားကိုယ်တိုင်လည်း တစ်မျိုးကြီးပဲ အဲအကြောင်းကြီးပြန်မကြားချင်ဘူး” (တူလေးက အန်တီပလို့ခေါ်တယ်)၊ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ၊ တူလေးက တခါတခါ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် စိတ်မာသလိုနဲ့ တခါတလေ သူပြောလိုက်တဲ့စကားတွေမှာ တူလေးရဲ့စိတ်ကိုမြင်ရတတ်တယ်။ တူလေးက အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်ကြီးတော့ မဖြစ်သေးပါဘူး၊ သူကိုယ်တိုင်ရေး၊ ဆို၊ တီးထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေ ပို့ပေးတတ်တယ်၊ သူ့ အိမ်မှာ ကိုယ်ပိုင်စတူဒီယိုလေးလုပ်ထားပြီး ဆေးခန်းထိုင်ရင်း သီချင်းတွေစပ်နေပါတယ်။ သီချင်းတွေစုနေပါတယ်။ အခွေထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ ပြောတယ်။ တူလေးရဲ့ ပထမအိပ်မက်လေး အောင်မြင်သွားစေချင်တဲ့အတိုင်း “ပထမဆုံးအိပ်မက်” ကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ တူလေးရဲ့“နှောင်ကြိုး” သီချင်းကိုလည်း သူငယ်ချင်းတွေနားထောင်ရအောင် တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီဝတ္ထုတိုလေးနဲ့ အတူ ချစ်ရတဲ့တူလေး ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေဖို့ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတိုင်း၊ လူတိုင်း အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေဖို့လည်း ဆုတောင်းမိပါတယ်။)
Beauty Magazine(August 2011)